शिवम् सिमेन्ट अब ५३ ग्रेड तथा ४३ ग्रेडमा पाइने :: Setopati
शिवम् सिमेन्ट अब ५३ ग्रेड तथा ४३ ग्रेडमा पाइने
शिवम् सिमेन्टले एन.एस.–५७२ अन्र्तगत ५३ ग्रेड सिमेन्टको इजाजत प्राप्त गरेर उत्पादन सुरु गरेको छ। शिवम् यसअघि ४३ ग्रेड ओ.पि.सी. सिमेन्ट उत्पादन गर्थ्यो।
यो सिमेन्ट एन.एस. क्वालिटी अर्वाड–२०१९ बाट पनि सम्मानित भएको थियो।यससँगै कम्पनीले आफ्नो निरन्तरको गुणस्तरिय उत्पादनलाई प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ। गुणस्तर सिमेन्ट उत्पादन र विक्री वितरणमा सधैं प्रतिवद्ध रहने कम्पनीको भनाइ छ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको उच्च गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले एन.एस.–५७२को अवधारणा सहित ग्रेडिङ सिस्टमबाट सिमेन्टको गुणस्तर मापन कार्य अगाडि बढाएको हो। अब कुनै पनि सिमेन्ट कम्पनीले ५३ ग्रेड अथवा ४३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्न एन.एस.–५७२ प्रमाणिकरण गर्नु अनिवार्य छ।
उक्त सिमेन्ट सन् २००९ मा नेपालका केन्द्र भाग हेटौँडामा स्थापित भएको हो। सो उद्योगले अत्याधुनिक जर्मन प्रविधी उक्त प्लान्टबाट आफ्नै चुनढुङ्गाको प्रयोग गरेर क्लिंकर र शिवम् सिमेन्ट तथा शिवम प्लस सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८, १८:५७:०१